Alahadin’ny SVM 2020. – FJKM
SAMPANA VOKOVOKOMANGA FJKM
Fiarahabana apostolika : II Jao. 3
Fiderana an’Andriamanitra : Salamo 122 (iaraha-mamaky)
Hira : F.F. 11
Fanambarana ny Sitrapon’Andriamanitra : Rom. 14 : 15 – 16
Sambatra ny mahitsy làlana…
Hira: 531 : 3
Hira: F.F. 35 : 1
Famelan-keloka atolotr’Andriamanitra: Jer . 31 : 3b , 34
Sambatra ny olona izay voavela ny helony …….
Hira : 489 : 1
Fanambarana ny Finoana : Fanekem-pinoana laharana faha 3
Rakitra – Hira : 53 (Fih.V.M.) na Sampana Vokovoko Manga na Antoko Mpihira
Fotoana ho an’ny ankizy – Hira : 787 : 3
Hira : 534 : 1, 2
Vakiteny: Zak 8 : 14 – 17/ Mat 5 : 25 – 26/ 2 Ko 13 : 11 – 14
Vavaka fangatahana + Rainay Izay any an-danitra
Hira : F.F. 16 : 2
“Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.Amen”
«Ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy, Zanaky ny Ray, amin’ny fahamarinana sy ny fitiavana.» (II Jaona 3).
Misaotra an’Andriamanitra isika raha mahatratra indray izao Alahady Manga 2020 izao, na dia manindry mafy izao tontolo izao aza ny areti-mandringana, izay diavin’ny firenentsika ihany koa. Ity no fotoana hifampiarahabantsika taorian’ny fanavaozana tompon’andraikitra tany amin’ny Zaikabe. Mifampiarahaba isika Birao vaovao rehetra ary mifampirary fahombiazana amin’ny asantsika. Teny faneva vaovao indray no iainantsika mandritra ny 4 Taona, taorian’ny Zaikabe tany Sambava, dia ny hoe : «Koa raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo» (Jaona 8: 36). Olona afaka ao amin’i Kristy isika; nefa, fahafahana tsy ho entina hanaraka ny nofo no fahafahana nataon’i Jesoa Kristy ho antsika.
Mankalaza an’Andriamanitra noho ny Jobily Volamena Faha 50 Taona isika Sampana Vokovoko Manga FJKM (1970 – 2020) sady miombona amin’ny vinan’ny FJKM hoe : « Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara ». Fanorenana trano fiangonana vaovao any Ambatolahy – Antanifotsy no tsangambato iainantsika izany Jobily Volamena sy ny vinan’ny FJKM izany. Ankoatra ny ezaka efa ataontsika amin’ny fitoriana ny Filazantsara, hanafahana ny olona amin’ny ratsy rehetra; ka ao anatin’izany ny fidorohana zavamahadomelina, dia ataontsika ho zava-dehibe koa ny fanorenam-piangonana any amin’ireo Kaominina tsy mbola misy Fiangonana FJKM. Efa hitanay ny ezaka lehibe nataonareo Sampana Vokovoko Manga tany amin’ny Fitandremana sy ny Synodamparitany sasany namokatra ireo fitaovana hijoroana ho vavolombelona toy ny Raki-kira Vokovoko Manga, Ivotoerana fihainoana (centre d’écoute) , trakta sy dépliant. Renay koa ny fitoriana Filazantsara ankalamanjana (filaharambe sy Tafika Masina) ataon’ny Sampana Vokovoko Manga isan-tSynodamparitany. Fantatray fa nanano-sarotra ny fanatanterahana izany tamin’ity taona 2020 ity noho ny fihibohana (confinement). Antenaina fa samy handamina fotoana vaovao indray isika, raha tena tsy nahatanteraka tokoa, rehefa mifarana ny fihibohana.
Hiezaka hatrany ny Sampana Vokovoko Manga Foibe hamatsy ireo Komity Foibe, mba hahazoany manofana ny tompon’andraikitra isan-tSynodamparitany sy isam-pitandremana. Ny kendrena amin’izany dia ny fahombiazana hahazoantsika Sampana Vokovoko Manga mitondra ny fahafahana tanteraka avy amin’i Jesoa Kristy ho an’ny olona rehetra.
fahombiazana hahazoantsika Sampana Vokovoko Manga mitondra ny fahafahana tanteraka avy amin’i Jesoa Kristy ho an’ny olona rehetra.
Ampirisihana hatrany ny isam-pitandremana hampiasa ny “Divaim-pandraisana” vita amin’ny voankazo vokarin’ny Sampana Vokovoko Manga FJKM. Hamafisina hatrany fa efa nahazoana alalana tamin’ny Fanjakana (tamin’ny alalan’ny Ministera miandraikitra ny fanjifana) ny fahazoana manaparitaka azy, ary hitantsika amin’ny “etikety” eny amin’ny tavoahangy ny laharan’izany fanomezan-dàlana izany.
Mampahery antsika Kristiana rehetra amin’ity « Alahady Manga » ity. Natao alohan’ny Fetim-pirenena hatrany izy ity, na mety hisy ny Fankalazana na tsia, hampahatsiahivana ny Malagasy fa azo atao tsara ny mankalaza fety tsy misy zava-mahamamo sy zavamahadomelina . Ampahatsiahivina hatrany ihany koa fa isika Kristiana rehetra no haneho ny fahatsaran’izany, fa tsy ny mpikatroka Vokovoko Manga ihany. Tandrovintsika mandrakariva ny maha tempolin’Andriamanitra ny tenantsika, ka isika Kristiana no vavolombelona manaja izany voalohany.
« Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, ka mahareta amin’izany; fa raha manao izany ianao, dia hamonjy ny tenanao sy izay mihaino anao koa .» (I Timoty 4 : 16).
Ho aminareo mandrakariva anie ny Tompo !
Ifanomezantsoa faha 29 May 2020
Ny Filoha Ny Tonia
RANAIVOARISOA Tiarison, Mpit RAKOTOMANANA Herintsoa Tahiry,Mpit